UCHRISSY TEIGEN PRANKS UMAMA WAKHE NGENYOKA YECOBRA SNAKE, INETIZENS - HOLLYWOOD
UChrissy Teigen Pranks Umama wakhe ngeNyoka yeCobra Snake, iNetizens
Imigangatho eyaziwayo neyaziwayo yaseMelika uChrissy Teigen kutshanje wenze into eyoyikisayo, kodwa ehlekisayo kumama wakhe ofumene intetho yewebhu. I-mannequin, ichongiwe kwimigudu yayo eyenzayo amaxesha ngamaxesha, kwakamsinya nje abalandeli bayo beqengqeleka phakathi kweendlela. Ngeli xesha, ubukrelekrele kunye nomculi odlalayo wankqonkqoza umama wakhe ngenyoka e-faux kumgangatho ukuze ambonise i-goosebumps. Ukuthatha isivumelwano sakhe esisemthethweni kuTwitter, uChrissy wabelana ngemifanekiso emibini, nganye irekhodwe endlwini yakhe kunye nemizuzwana eyi-10 kunye ne-14 ngokulandelelana. Kwenye unokubonwa esenza iyelenqe ngenyoka yokwenziwa kwindawo yesehlo kwaye eyesibini ityhila impendulo exabisekileyo kamama wakhe emva kokubona isilwanyana esirhubuluzayo emhlabeni.
- chrissy teigen (@chrissyteigen) NgoSeptemba 8, 2020
ndivota njani kwi-agt
Njengokuba ikliphu ivula, uChrissy unokubonakala ekulungele ukuba umama wakhe angene kwindawo edadayo ngaphakathi echibini leyadi engazi ukuba kuya kwenzeka ntoni. Umama kaChrissy emva koko uhamba esiya kwelikhaya, ngokungakhathali, encoma umbono obukekayo unxibe isinxibo sakhe esiluhlaza. Amanyathelo nje ambalwa ukusuka emnyango, lo mfazi umi ngumkhenkce kwaye ukhuphe isikhalo xa edibana nenyoka enkulu efana nephimpi. Engacingi ukuba ubekhe wangumbulali, umama kaChrissy umile etshintshiwe efuna ukuncediswa kuba le mannequin emva koko yahleka yempendulo kanina. Iividiyo zathathela ngaphezulu kweembono ze-9 lakh njengoko abathengi babothukile kwi-prank prank prank, eyafunyanwa njengehlekisayo ngabanye abaninzi.
Iprank kaChrissy iphumelela kwiwebhu
Ndiya kuthi ngokuqinisekileyo uxelele uMichael ukuba nonke nicinge ukuba benza iinyoka ezinengqiqo! Le shit ibonakala ifeketha kakhulu kulol ngamnye, yabhala enye, isenza ukuhleka kwe-emoticon. Kungenxa yesi sizathu le nto ndihlala apho umoya ubabuhlungu ubuso bam, bathi omnye komnye, bothukile. Ndinenyoka ebambekayo kwinyango yam emva kwendlu yokungena. Manditsho nje ukuba andinabo abantu abaninzi endingabaziyo abankqonkqozayo kwam, utshilo owesithathu. Ndenza inzame yokufumana isivamvo sentshukumo esenza isandi sokurhashaza sisenze sibe sengqiqweni ngakumbi, isine eqhula. Ividiyo ukusukela ngoko iye yasasazwa kakhulu kuba ibangele umdla omkhulu kuyo yonke imithombo yeendaba.
Kutheni usenza uMama wakho ngoluhlobo ?! Hleka kakhulu
-Tammy Wilson (@ RachKrav64) NgoSeptemba 8, 2020
Uyathetha njalo, hamba uyokuthatha loo nyoka 🤣
-Marvin Scott (@gameovermarv) NgoSeptemba 8, 2020
Andikhathali nokuba umntu uthini… elaa nenekazi laliyimigewu
-U r ngokucinga kakhulu (@ Ozulaa2) NgoSeptemba 8, 2020
Esi sikhalo sincinci wayeza kuyilwa nenyoka ukuba naye wayenayo 🥴🥰
- T.J. Phumlani (@phumlani) NgoSeptemba 8, 2020
Le mithetho indinike isifo sentliziyo. Ndacinga ukuba yeyokwenyani. pic.twitter.com/qqdCdqo8iv
-Cami Sheffield (@CamiAnnS) NgoSeptemba 8, 2020
I-Omg… 🤭 isilumkiso kwixesha elizayo nceda..LOL. Yenze yonke into encinci kum curl kunye pucker ngaxeshanye.
-URob Hauserman (@RobHauserman) NgoSeptemba 8, 2020
Yinyani, nangona kunjalo ibonakala ingekho ngaphakathi kwividiyo. Ukuba ubona inyoka ebubuxoki emntwini, unokwazi ukuba yinyani ……. Ndingathanda ukukhala nangona
Uqhaqho lweplastiki lwe-mina starsiak
-Krossover (@DJ_KrossOver) NgoSeptemba 9, 2020
Ndiyakunyaniseka, ndingabulala lowo wenze lento kum. Inyoka yeyona nto indixhalabisayo
-Wendi Raé Ballew (@ IidemonReject65) NgoSeptemba 8, 2020
Izigaba: Umqala Iindaba Tech-Iindaba
wendy williams unyana ka-2015
Umhla wokukhutshwa kwe-shades ezingama-50
Umhla wokukhutshwa kobugorha
iposi ivuliwe ngosuku lwekholumbus